Ungamthola Kanjani Umxhumanisi we-SEO | Martech Zone
Ungamthola Kanjani Umxhumanisi we-SEO
NgoLwesithathu, Septemba 14, 2011 NgoLwesithathu, Okthoba 26, 2011 Douglas Karr
Namuhla ekuseni bengikade ngisesocingweni nomngani wami obenenkampani emshayela ukuthi imnikeze ngezinsizakalo ezisezingeni eliphansi ze-Search Engine Optimization. Wayenomdlandla omuhle ngaleli thuba, ekugcineni ethola insizakalo enhle eyayizomnikeza ukuvezwa lokho Highbridge inga… kodwa ngezingxenyana zezindleko. Uma kukuhle lokho, heck… singabhalisa!
Into yokuqala engiyenzayo lapho othile ejabule kanjena ukubuyekeza amazinga ezinjini zabo zokusesha usebenzisa ithuluzi elifana ne- Semrush. Uzobona imiphumela ngakwesokudla. Kalula nje, le miphumela iyadabukisa. Ngivale igama lenkampani elisezingeni le-4 (ugh!) Futhi abalinganiseli kahle (3 noma ngaphezulu) ngethemu elilodwa!
Inothi elilodwa kulokhu… Ngincoma ukuthi uzibheke kusayithi elifana nalokhu Semrush ngoba inkampani oyifunayo kungenzeka ingaklelisi imigomo yokuncintisana kakhulu efana ne- “SEO”. Highbridge, isibonelo, amazinga ngokwemigomo ehlotshaniswa ne- Izindaba ezintsha ukumaketha. Senza umsebenzi omuhle namakhasimende ethu awabeka ngokulinganayo, kepha lelo yithuluzi elilodwa kuphela ebhokisini lethu lamathuluzi. Siyazi ukuthi a isu lokumaketha elihamba phambili efaka yonke imidiya esebenzayo (kufaka phakathi i-SEO) isebenza kahle kakhulu. Kodwa-ke, akukho kungabaza ekubuyekezeni imiphumela yosesho ukuthi empeleni siyazi esikwenzayo.
Abacwaningi be-Search Engine Optimization, mhlawumbe, bangabaluleki abalula kakhulu embonini ukuqinisekisa ubuqiniso ku… bangabe besabheka phambili kunjini yokusesha!
Izindlela Ezimbili Eziphumelelayo Zokukhulisa Uhlu Lakho Lwe-imeyili